recharger(recharger) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
साहस उर्जाको आईपीओमा अचाक्ली आकर्षण, आवेदकको संख्या २४.६४ लाख बढी
आईएमएसले ल्यायो ‘बिग डिस्काउन्ट, बिग स्माइलस्’ अफर, यस्ता छटु र गिफ्ट
ग्राउन्ड जिरो : ‘बजार माथि नै जाने हो, प्रतीक्षा एउटा गुड न्युजको मात्र’
सरकारले उपचार खर्च दिने भएपछि मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामी खुसी, अर्थमन्त्रीलाई दिए धन्यवाद
रिचार्जरले अक्सिजन सिलिन्डर र कन्सन्ट्रेटर भाडामा दिने, १ घन्टामै सामान उपलब्ध गराउने
काठमाण्डौ । ई–कमर्स प्लेटफर्म रिचार्जरले अक्सिन सिलिन्डर र कन्सन्ट्रेटर भाडामा उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपाली बजारमा कोभिडसम्बन्धी उपकरण सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको रिचार्जरले महँगो मूल्यका उपहरणको पहुँच नभएकाहरुलाई भाडामा उपकरणहरु उपलब्ध गराउने भएको हो। १० लिटर क्षमताको अक्सिजन सिलिन्डर प्रतिदिन २५० र ४० लिटर क्षमताको...
रिचार्जरले भित्र्यायो उत्कृष्ट ब्रान्डका अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले ठूलो संख्यामा किन्यो
काठमाण्डौ । ई–कमर्श प्लेटफर्म रिचार्जरले कोभिड बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने उत्कृष्ट ब्रान्डका अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ। यसअघि कोभिड प्रोटेक्टिभ उपकरणको बिक्री बितरण गर्दै आएको रिचार्जरले अक्सिजनको अभावलाई ध्यानमा राख्दै अस्पताल तथा घरायसी प्रयोजनका लागि ठूलो संख्यामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर �...
रिचार्जरले अक्सिमिटर रु. ७९९ र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर रु. ३९९९९ मै उपलब्ध गराउने
काठमाण्डौ । ई कमर्श प्लेटफर्म रिचार्जरले कोरोना संक्रमितको चाप बढेका बेला देखिएको अक्सिजन अभावलाई ध्यानमा राख्दै बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर उपलब्ध गराउने भएको छ । घरायसी प्रयोजनका लागि रिचार्जरले ५ लिटर क्षमताको YU-300 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ३९ हजार ९९९ रुपैंयामा उपलब्ध गराउने भएको हो । रिचार्जरको मोबाइल एपमा जेठ...
किन अवरुद्ध भयो रिचार्जरको सेवा ? यस्तो छ कारण
काठमाण्डौ । ई–कमर्स प्लेटफर्म रिचार्जरले प्राविधिक समस्याका कारण सेवा अवरुद्ध भएकोमा क्षमा याचना मागेको छ। रिचार्जरले शुक्रबार दिउँसो १२ बजेदेखि ५ बजेसम्म सम्म ह्याप्पी आवरमा ९९९ रुपैयाँमा अक्सिमिटर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। जसका कारण रिचार्जरको मोबाइल एप तथा वेब पोर्टलमा एकै समयमा लाखौँको संख्यामा आएको ट्राफिकका कारण...
रिचार्जरले प्रयोगकर्तालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने
काठमाण्डौ । ई–कमर्स प्लेटफर्म रिचार्जरले आफ्ना ग्राहकलाई कोरोना संक्रमण भएको खण्डमा अस्पतालसम्म पुग्नका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। हाल कोरोना महामारीको संक्रमण तीव्र बनिरहेका बेला अस्पताल अभाव भइरहेको सन्दर्भमा अस्पताल खोज्नका लागि पनि रिचार्जरले सहयोग गर्नेछ। २०७७ वैशाख १ गतेदेखि रिचार्जरबाट सामान...
नयाँ वर्षमा रिचार्जरले ७०%सम्मको छुटमा ग्याजेट्स उपलब्ध गराउने, मुलुकभर क्यास अन डेलिभरी
काठमाण्डौ । इकमर्स प्लेटफर्म रिचार्जरले नयाँ वर्षको अवसरमा ‘न्यू इयर सेल’ अफर सार्वजनिक गरेको छ। मोबाइल एपका प्रयोगकर्तालाई केन्द्रमा राखेर रिचार्जरले ७० प्रतिशतसम्मको छुटमा विभिन्न किसिमका ग्याजेट्स उपलब्ध गराउने भएको हो। देशभरि डेलिभरी सेवा दिने रिचार्जरले ग्याजेट्सका अलावा अन्य सामान खरिद गर्दा डेलिभरीको समयमा भुक्तानी...
रिचार्जरको भ्यालेन्टाइन्स अफर : रु. ५९९९ मा हेलिराइड
काठमाण्डौ। नेपाली ई–कमर्स मोबाइल एप रिचार्जरले ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’का अवसर पारेर पोखरा हेलिराइड अफर सञ्चालनमा ल्याएको छ। रिचार्जरबाट पोखरा साइट सिन बुकिङ गर्नेले ५ हजार ९९९ रुपैयाँमा पोखरासम्मको हेलिराइड पाउने अफर ल्याएको हो। अफरमा सहभागी हुनका लागि शुक्रबारदेखि रिचार्जरको मोबाइल एपमा बुकिङ खुल्ला गरिएको छ। यसका साथै...
रिचार्जरको क्रिसमस अफर : ७८०० रुपैयाँको मासिक किस्तामा आइफोन १२
काठमाण्डौ । मोबाइल एप रिचार्जरले क्रिसमसको अवसर पारेर छुट अफर सार्वजनिक गरेको छ। यसका साथै रिचार्जरले आइफोन १२ किन्न चाहनेहरुलाई ७ हजार ८८८ रुपैंयाको मासिक किस्तामा १२८ जिबी स्टोरेज भएको आइफोन १२ उपलब्ध गराउने भएको छ। यसका लागि डाउन पेमेन्टमा कुनै शुल्क नलाग्ने तर क्रेडिट कार्ड अनिवार्य हुनेछ। माछापुछ्रे बैंक, एनआईसी एशिया बैंक,...
रिचार्जरमा दशैं बोनान्जा,अफर भित्र अफरमा छुटै छुट
काठमाण्डौ । मोबाइल एप रिचार्जरले बडादशैंलाई लक्षित गर्दै दशैं बोनान्जा, अफर भित्र अफर सुरु गरेको छ । आफ्ना प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्दै रिचार्जरले छुटै छुटको अफर सहित बोनान्जा सुरु गरेको हो । दशैंको किनमेल गर्नेहरुलाई सस्तो मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउन रिचार्जरले गत कात्तिक १ गतेदेखि अफर सुरु गरेको बताएको छ । अफर अन्तरगत रिचार्जरबाट...
एनआईसी एशियाका ग्राहकलाई ‘वान प्लस’ का मोबाइलमा आकर्षक छुट
काठमाण्डौ । मेगा ग्याजेट्स सेल मेलामा एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडका ग्राहकले चर्चित ब्रान्ड वान प्लसका मोबाइल खरिदमा आकर्षक छुट पाउने भएका छन्। गत भदौ ११ गतेदेखि जारी मेगा ग्याजेट्स सेल मेलाको अवधि एक साता थप गर्दै रिचार्जरले एनआईसी एशिया बैंकसँगको सहकार्यमा वान प्लसका मोबाइलमा छुट अफर ल्याएको हो। अफरअन्तर्गत एनआईसी एशिया बैंकका...
पाँच वाणिज्य बैंकसँग रिचार्जरको छुट सम्झौता, मेगा सेल मेलामा ५० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाण्डौ । कोभिडको सुरक्षा सामग्री सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको रिचार्जरले ५ वटा वाणिज्य बैंकसँग छुट सम्झौता गरेको छ । भदौ ११ गतेदेखि सुरु भएको मेगा ग्याजेट्स सेल मेलामा सेवाग्राहीलाई शुन्य प्रतिशत व्याजदरमा किस्ताबन्दीमा सामान उपलब्ध गराउन वाणिज्य बैंकहरुसँग छुट सम्झौता गरिएको रिचार्जरले जनाएको छ । रिचार्जरले एनआईसी...
रिचार्जरमा ‘बाइ वान गेट वान फ्रि’, एन ९५ मास्क ३५ रुपैयाँ
काठमाण्डौ । मोबाइल एप रिचार्जरले आगामी भदौ ११ गतेबाट ब्राण्डेड सामाग्रीहरुको मेगा सेल ग्याजेट मेला सञ्चालन गर्ने भएको छ । मोबाइल एपमा सञ्चालन हुने उक्त मेगा सेलमा सेवाग्राहीले ५० प्रतिशतसम्मको छुटमा लोकप्रिय ब्राण्डका मोबाइल, ल्यापटप, टेलिभिज, फ्रिज जस्ता विद्युतीय उपकरणका साथै जुत्ता, कपडा, झोला, परफ्युम लगायतका सामानहरु उपलब्ध हुने...
रु. ५०० बढी पर्ने केएन-९५ मास्क रु. १७५ मै, एनआइसीको प्लेटफर्मबाट भुक्तानी गर्दा थप १०% छुट
काठमाण्डौ । मोबाइल एप रिचार्जर र एनआईसी एशिया बैंकका बीचमा छुट सम्झौता भएको छ । सस्तो मूल्यमा कोरोना सुरक्षाका सामग्रीको बिक्री गर्दै आएको रिचार्जरबाट सामान किनेर एनआईसी एशिया बैंकको क्यू आर कोड, डेविट कार्ड तथा क्रेडिट कार्डबाट रकम भुक्तान गर्दा १० प्रतिशत छुट पाइने बैंकले जनाएको छ । ग्लोबल की टेक्नोलोजी र रिचार्जरका बिचमा भएको...
रिचार्जरबाट सामान किन्दा निःशुल्क फेस मास्क र स्यानिटाइजर
काठमाण्डौ । मोबाइल एप रिचार्जरले एपबाट सामान खरिद गर्ने सेवाग्राहीलाई फेस मास्क तथा स्यानिटाइजर निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । रिचार्जरबाट सामान अर्डर गरेको १२ घण्टा भित्र काठमाण्डौं उपत्यकामा सामान डेलिभरी हुने रिचार्जरले जनाएको छ । ‘कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सर्वसाधारणलाई घरबाट बाहिर...
होलीको टीसर्ट १ रुपैंयाँमै
काठमाण्डौ । मोबाइल एप रिचार्जरले होलीको अवसर पारेर रिचार्जरले १ रुपैंयामा होलीको टीसर्ट उपलब्ध गराउने भएको छ । रङहरुको पर्व होलीलाई हर्षोउल्सास बनाउनुका साथै आफ्नो ब्राण्ड प्रवद्र्धनका लागि होलीको थिमयुक्त टीसर्ट १ रुपैंयाँमा उपलब्ध गराउने अफर ल्याएको रिचार्जरले जनाएको छ । रिचार्जरका अनुसार फागुन २३ गते शुक्रबार दिउँसो १...
मध्य भोटेकोशीको पहिलो चरणको आईपीओ बाँडफाँड भोलि
अनलाइनबाट टिकट बुकिङ गर्दा यात्रुलाई एक बोतल पानी फ्री
‘आइएमई डबलको डबलको डबल’ अफरका साप्ताहिक विजेता घोषित, केशव र विशालले पाए दोब्बर रकम
महालक्ष्मी लाइफको राष्ट्रिय बीमा जागरण अभियान : दुई जिल्लामा कमिटी गठन
लाभांशको सिजनमा किन घट्यो सेयर बजार ? यसो भन्छन् जानकार
सानिमा बैंकले ल्यायो ‘दसैँ धमाका’ योजना, दराजबाट सामान किन्दा विशेष छुट
घट्यो हेटौँडा सिमेन्टको मूल्य, अब प्रतिबोरा रु. ७००
व्यवसायीका संघसंस्थामा चुनाव हुन्छ तर हारजित हुँदैन : ढकाल
मानुषी लघुवित्तको सेयर भोलिबाट कारोबारमा आउने, ओपनिङ रेन्ज कति ?
दसैँका लागि सोमबारबाट अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्दै, कुन रुटको भाडा कति ? (सूचीसहित)
नेपालमै पहिलोपटक केएफएले ल्यायो ९ स्तम्भसहितको बीसीएसआईटी